शरीर भरि गोली बोकेका योद्धाहरुलाई अपमान गर्दा तिमीलाई आनन्द आउँदो रहेछ
शरीर भरि गोली बोकेका योद्धाहरुलाई अपमान गर्दा तिमीलाई आनन्द आउँदो रहेछ - Nepal Talk
भाद्र १२ गते, २०७६ मा प्रकाशित
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीजी,
तिमीले जनता र शहीदहरुको कुर्वानीबाट निर्मित कर्णाली प्रदेशको बागडोर सम्हालि रहेका छौ । नेपालको इतिहास, भाषा, साहित्य र संस्कृतिको उन्ननयनमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने इतिहासकार, संस्कृतिविद् योगी नरहरीनाथको नाममा प्रतिष्ठान गठन गरेको खबरपछि मैले यो पत्र लेखेको हुँ ।
जव योगी नरहरीनाथ राजसंस्थाको पक्षमा लडि रहेका थिए, तव हामी राजसंस्थाको अन्त्यका लागि लडि रहेका थियौँ । त्यो बेला लड्दा लड्दै शहादत प्राप्त गर्ने जनमुक्ति सेना शहिद प्रतिष्ठान बनाउन तिमी सक्रिय भएको भए मेरो हृदयले तिमीलाई हजारचोटी सलाम गर्ने थियो । तिमी त जनमुक्ति सेनाका योद्धालाई रुवाउँदै घर पठाएर चिहानबाट ब्यूँताएर योगी नरहरीनाथको नाममा प्राविधिक शिक्षाको कारोवारमा जुटिरहेका रहेछौ। तिमीले कुखुरा फार्ममा त लगानी गरेकै थियौ । अव नि:शुल्क शिक्षाका हिमायती, कर्णालीको मुख्यमन्त्री नै शिक्षाको व्यापारी हुने दिशामा गइ रहेको देख्दा मेरो मनमा हजार प्रश्नहरु उठि रहेका छन् । सारमा मलाई लाग्दैछ कि तिम्रो नेतृत्वमा सुन्दर, शान्त र समृद्ध कर्णाली अव बन्ने छैन ।
जव योगी नरहरीनाथको नाममा गठित प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरुको विवरण हेर्छु, त्यहाँ तिम्रो शाही अहंकारको वान्ता देखिन्छ। त्यो योगी नरहरीनाथजस्तो मुलुकका सवै भाषा, धर्म, संस्कृति वैदिक साम्यवादको प्रवक्ताको प्रतिष्ठानमा शाहीवादीहरुको अनुहारले योगीको गरीमालाई त केही फरक पर्दैन तर तिमीहरुको घटिया सोंचलाई व्यक्त गर्दछ। तिमीलाई थाहा होला योगी नरहीनाथकै पहलमा दाङस्थित संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। २०२८ सालको नयाँ शिक्षा नीतिको विरोध गर्ने एक मात्र नेपाली शिक्षाविद् हुन् योगी । जसका कारणले पंचायतले जेल पनि कोचेको थियो। नयाँ शिक्षा नीतिको विरोधको अर्थ के लाग्छ तिमीलाई थाहा छ ? थाहा छैन पनि होला। यसको सोझो अर्थ लाग्छ कि शिक्षाको आधुनिकीकरणका नाममा व्यापार रोक्नु । तिमीले गठन गरेको प्रतिष्ठानको स्पष्ट उद्देश्य के देखिन्छ भने आधुनिक शिक्षाको व्यापार गर्ने। यसरी जसले आफ्नो जीवनमा जे कुराको विरोध गर्यो, उसकै नाम उसकै विरुद्धमा प्रयोग नगर्नु नै पछुवाहरुको धर्म हुन्छ। यदि तिमी योगी नरहरीनाथलाई साँच्चिकै सम्मान गर्छौ भने उनको नाममा शिक्षाको व्यापार गर्ने योजना रद्द गर्न म सुझाव दिन्छु।
तिमी जनमुक्ति सेनाको पूर्व कमाण्डर भएको घाम जत्तिकै छर्लंग छ र तिमी अहिले कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको पदमा आसिन छौ। तिमीले खाएको, हिँडेको, तिम्रो जीवनशैलीले समाजमा असर पार्दछ। तिम्रो अभिव्यक्तिमा कर्णालीलाई विश्वकै नमुना प्रदेश बनाउँछु भन्ने कुरा धेरै चोटी सुनेको छु । यो तिमीले बनाएर त होइन कर्णाली प्रदेश अभाव, गरिबी, रोग भोकले विश्वको नमुना नै छ। तिमी आफ्नो कार्यकालमा कर्णालीलाई विश्वको नमुना प्रदेश बनाउने धेरै परको कुरा गर्छौ । के साँच्चिकै कर्णाली प्रदेश विश्वकै नमूना प्रदेश महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा निर्माण होला कि नाइँ भनी एक मिनेट गमेर हेर्ने हो भने म कतैबाट पनि नमूना देख्दिनँ।
तिमीले कर्णाली प्रदेशका लागि सुरुको अन्तरिम बजेट, २०७५/०७६ र ०७६/०७७ को बजेट ल्याएर के सावित गरिसक्यौ भने तिमीभित्र कर्णालीका लागि आशालाग्दो कुनै नयाँ सपना छैन। सांसदहरुको भागमा १० करोडका दरले बाँडेर संसद चलाएका छौ भने कर्णाली प्रदेशको अहिलेसम्म कुनै नयाँ गौरवको आयोजना बन्न सकेको छैन। नीति निर्माणमा पनि कतिसम्म पछि छौँ भने नि तराईको वडा जोड्ने सडक राष्ट्रिय सडकमा सूचिकृत हुँदा कर्णालीका जिल्ला जोड्ने सडकहरु पनि स्थानीय सडकको सूचीमा छन् । आफ्ना कार्यकर्ताको खल्तीमा जाने गरी अनुदान वितरण गरेका छौ।
महेन्द्रजी ! मेरो र तिम्रो व्यक्तिगत चिनजान पुरानै भएपनि सहकार्य भने लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग प्रकरणदेखि उर्जा मन्त्रालयमा भएको थियो। यो सहकार्यको अनुभवबाट म के भन्छु भने तिमी कर्णालीलाई बनाउने गफ दिनुभन्दा पहिले आफूभित्रका गंभीर गल्तीहरु सच्याउनतिर लाग्नु वेश होला। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बोकेको शाहीजी तिमी धनी वन्न सक्छौ। तिमी ठेकेदार, पैसावालहरुको नेता बन्न सक्छौ । यदि यही पाराले कालिकोटका जनतालाई दुईवटा निर्वाचनमा त अल्मल्याइ हाल्यौ। चुनावमा फेरी झूठको खेती गर्न सक्छौ अपितु असली जनताको नेता बन्नभने कदापी सक्ने छैनौ।
तिमी जनयुद्धबाट आएको कमाण्डर भएर पनि तिमीभित्र शाही अहंकारवाद चरम छ। शाही जातिवादले तिमीलाई नेता बनाउँदैन। म तिम्रो निर्वाचन क्षेत्रको नागरिक पनि हुँ। म आफ्नै हातले तिमीलाई भोट दिएको भोटर पनि हुँ। मैले चुनावमा तिम्रै लागि मेरा आफन्तजनलाई मत दिन प्रेरित गरेको पनि हुँ। अहिले तिमी जुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री छौं त्यो प्रदेश मेरो पनि हो र तिम्रो पनि हो। म त्यही प्रदेशको नागरिक हुँ। अहिलेको सत्तारुढ नेकपाको तिमी केन्द्रिय सदस्य,कालीकोटको इन्चार्ज, मुख्यमन्त्री छौ। यस अर्थमा तिमी भाग्यमानी छौ। तिमी पार्टीको माथिल्लो दर्जाको कार्यकर्ता हौ। म पदविहीन तर अहिलेसम्म यही पार्टीको पक्षमा काम गर्दै आईरहको पार्टीको सदस्य हुँ भन्ने मेरो दाबी छ। त्यसैले मसँग सार्वजनिक रुपमा प्रश्न गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित छ।
मेरो पहिलो भनाई यो छ की तिमी जातिवादी छौ। तिमी सोध्ने छौ कसरी ? वाहियात तर्क। म भन्छु तिमीले योगी नरहरीनाथको नाममा प्रतिष्ठान गठनमा शाही पदाधिकारीहरुमात्र राखेका छौ। त्यत्रो विशाल वैदिक साम्यवादको प्रवक्ताको प्रतिष्ठान। संस्कृत विश्वविद्यालयको संस्थापकको प्रतिष्ठान । नेपाली इतिहासको गम्भीर शोधकर्ताको प्रतिष्ठान। तिमी न विश्वविद्यालयको महत्व, न इतिहासको महत्व, न वैदिक साम्यवादको महत्वबोध भएका दुई चार जना आसेपासे शाहीहरु राखेर हुन्छ भन्ने सोंच राख्नु नै जातिवादी, ट्रेडवादी मानसिकताको उपज हो । तिमीले भन्ने छौ योगी नरहरीनाथको नाममा प्रतिष्ठान गठन गर्नु मेरो अपराध हो र ? अरुले पनि तिम्रै सपोर्ट गरेर भन्छन् होला। होइन यो गठन गर्न पाउनु तिम्रो अधिकार हो । तर म यसमा असहमत छु। तिमीले जुन उद्देश्यले प्रतिष्ठान गठन गर्यौ, त्यो उद्देश्य भ्रष्टाचारको नियतले ओतप्रोत छ। त्यो उद्देश्यमा पैसा कमाउने चरम महत्वाकांक्षा छ। त्यही भएर म प्रश्न सोध्दैछु । तिमीले योगी नरहरीनाथको नाममा प्रतिष्ठान गठन गर्दै गर्दा के योगी नरहरीनाथका नजिकका आफन्तको अनुमति लियौ ? उनी जन्मेको जन्मभूमिका नागरिकको सुझाव लियौ ? प्रतिष्ठान गठनको लागि तिमीले सार्बजनिक बहस चलायौ ? तिम्रा ३ –४ जना सल्लाहाकारहरुले यही सल्लाह दिएका हुन् ? अहँ केही पनि गरेनौ । किनकी तिमीले भित्र भित्र खुसुक्क पैसा कमाउने कालो मन लिएर दर्ताको प्रक्रिया थाल्यौ। अनि आफ्नै नातेदारलाई त्यसको मालिक बनाउने कुचेष्टा गर्यौं अहिले सार्बजनिक भईसकेपछि अब के गर्छौ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यदी गठन गर्नु नै थियो भने सुर्खेतमा होइन त्यो प्रतिष्ठान कालीकोटको भूमि जहाँ योगी नरहरीनाथ जन्मे त्यही स्थापना गर्नुपथ्र्यो।
सुर्खेतमा त दर्जनौँ टेक्निकल कलेजहरु छन्। त्यहा स्थापना गर्नु कुनै आबश्यकता छैन । त्यो प्रतिष्ठानको पदाधिकारी समाजमा स्वीकार्य सर्वमान्य व्यक्ति हुनुपथ्र्यो। त्यो प्रतिष्ठानको पदाधिकारीमा शहीद परिवार, घाईते परिवारका आफन्तहरु हुनु पथ्र्यो। त्यहाँ पनि तिम्रो श्रीमतीलाई राख्नै पर्ने हुन्छ र ? अनि मुर्धन्य व्यक्तित्वको नाममा गठन भएको प्रतिष्ठानमा सब्बै तिम्रा नातेदारहरुले भरिएको हुनुपर्छ र ? त्यो पनि सबै आफ्नै जातको । यो बाट के पुष्टी हुन्छ भने तिमी जातिवादी नेता हौ । तिमी जति जातिवादी बन्न खोज्नेछौ, तिम्रो अवसान त्यति नै छिटो हुनेछ । तिमी जातिवादी नेता हुँदा कालीकोट जिल्लाको पार्टी गठनमा पनि यसको असर परेको भनेर अहिले सर्बत्र कुरा फैलिरहेको छ । हुन त सुर्खेतको एक कार्यक्रममा तिमीले ठकुरी समाज चाहिन्छ भन्दै यसअघि भाषण नगरेको पनि होइन। त्यहीबाट आमले कुरा उठाइरहेकै थिए। अहिले यो पुष्टी हुँदैछ। तिमीले कालीकोटबाट जित्दा शहीद, घाईते, बेपत्ता, दलित, बाहुन, क्षेत्री र अन्य समुदायका मत पाएको बिर्सिएकै हौ ? यत्ति छिट्टै। के अरुलाई भेडा गोरु सम्झेको हो तिमीले ? सचेत नागरिक छन् कालीकोटमा। यदी कोही जातीवादी नेता बन्ने दुश्साहस गर्छ भने त्यसको परिणाम आगामी दिनहरुका कालिकोटमा देखिने नै छ।
मेरो दोस्रो भनाई के छ भने तिमी दलाल चरित्रका छौ । माथि चाकरीवाद लागू गर्छौ र तल नोकरशाही बन्छौ । यो नसक्नेलाई पुजा गर्ने र सक्नेलाई कुल्चने प्रवृत्ति भनेको पशुजगतमा स्वभाविकृत हुन्छ । मानव त दर्शन, आदर्श र आन्दोलनले हरेक नागरिकलाई सार्वभौम ठान्दछ। तिमी लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर एकाएक चर्चामा आयौ। त्यो भन्दा पहिले तिमी न चर्चित थियौ न तिमी चाहेर पनि चर्चित हुन सक्थ्यौ । तिमी जनार्दन शर्माको योजनामा हाम फाल्यौ। यो तिम्रो साहस हो या बाध्यता ? म भन्छु बाध्यता । तिमी यो योजनामा सरिक हुन्नथ्यौ भने तिमी न ऊर्जामन्त्री बन्न सक्थ्यौ न तिमी मुख्यमन्त्री । तिमी मन्त्री बन्ने लालसाले जनार्दन शर्माको योजनामा हाम फाल्न तयार भएकै हौ । यो अरुले पनि गर्न सक्थे। तर तिमी शर्माको योजनामा मन्त्री बन्ने लालसामा हाम फाल्न तयार भएका हौ। तिमीले ऊर्जा मन्त्रालय त्यही भएर पाएका हौ। तिमी असली चाकडीबाज हौ । तिमी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न कति पटक बर्षमान पुन, कतिपटक शक्ति बस्नेत, कति पटक जनार्दन शर्माको दैलो चाहार्यौ,दुनियाँलाई थाहा नभएको हो र ? जनार्दन शर्माको अगाडी घुँडा टेकेर हँ मा हँ मिलाएर तिमीले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका होइनौ र ? नत्र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नरेश भण्डारी हुने करिब करिब पक्कापक्की थियो । तिमी सोच्छौ होला तिमीले जसरी माथि नेताहरुको चाकडी गर्यौ, तिम्रो पनि अरुले त्यसरी नै चाकडी गरुन् । यहीबाट पुष्टी हुन्छ तिमीमा चाकडी र नोकरशाही शैलीको चरमोत्कर्ष छ। स्वाभिमानीहरु मर्न तयार हुन्छन् तर झुक्न जान्दैनन् । तर यहाँ झुक्नेहरुको दासजुलुसमा सवै सहभागी हुँदैनन्। यो चाहीँ याद गर ।
तेस्रो मेरो कुरा के छ भने तिमी नितान्त व्यक्तिवादी छौ । तिमी दुनियाँ मेरो अनुसार चल्नुपर्छ भन्छौ। जहाँ गयो उपदेश दिन थालि हाल्छौ। तिम्रो गफ सुन्दा यस्तो लाग्छ– दुनियाँका सबै बिषयको जानकार, सबै बिषयको सर्वविज्ञ, वैज्ञानिक, डाक्टर, वकिल, प्राध्यापक तिमी नै हौ । तिमी बोलेर कहिल्यै थाक्दैनौ । तिमीले कर्णालीमा सुरुवात गरेका योजना अहिले कतिका लागु भए ? हिसाब गरौं न एक एक । तिमीले प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते गर्ने सरसफाई योजना नाटक मञ्चन हो कि योजना ? अहिले कता हरायो त्यो योजना ? तिमीले प्रचारमा आउन झाडु समात्यौ, तिमीले नाटक देखाउन सुर्खेतका गल्ली गल्लीहरु सोहोर्यौ । अहिले त कर्णाली प्रदेशको बिरेन्द्रनगर बजार विश्वकै सुन्दर र सफा शहर बन्यो होला नी है ? कर्णाली प्रदेशका जिल्ला मुकाममा फोहरको कसिंगर छ की छैन ? मैले जे गरें ठिक गरें मैले जे भने ठिक भने यो व्यक्तिवादको भद्दा नमुना हो ।
चौथो सबैभन्दा तिमीमा देखिएको समस्या भनेको चरम आर्थिक अपारदर्शीता हो । तिमी पैसाको पछि लाग्दै गर्दा थाहा छैन तिमीलाई त्यही पैसाले गिज्याई रहेछ। तिमी यतिसम्म गिर्यौ कि तिम्रो श्रीमतिले काठमाडौंमा बसेर कालीकोटको एक विद्यालयमा बर्षको एक पटक पुगेर हाजिर लगाउँदै तलब खाँदा पनि तिमी ठिकै हो भन्थ्यौ । यदि नैतिकता तिमीमा हुँदो हो त यो गलत हो भन्ने साहश तिमीमा हुनुपर्ने हो । तर तिमी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै एक पछि अर्को बदमासी गरिरहेका छौ । तिमीले यति मात्र हो र ? विशिष्ट श्रेणीको जीवननिर्बाह भत्ता समेत पचायौ। विशिष्ट श्रेणीको जीवन निर्बाह भत्ता ह्वीलचियरमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरुका लागि हो तर तिमीले पचाएको सार्बजनिक हुँदा समेत तिमी थाहा नपाएर हो भन्दै थियौ । मलाई अचम्म लाग्छ, तिम्रो न ढाड भाँच्चिएको छ न तिम्रो हात खुट्टाहरु भाँच्चिएका छन्, तिमी ह्वीलचियरमा बसेकाहरुको भत्ता यसरी आफैले हसुरी रहँदा तिमीलाई लाज लागेन है । ह्वीलचियरमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको योद्धाहरुको याद आउनु पर्ने होइन र ? यो गंभीर प्रश्न हो। यो नैतिकताको प्रश्न हो। तिम्री श्रीमतीले कालीकोटको एक विद्यालयबाट तलब बुझिरहँदा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर स्थित एक सरकारी राजस्व कार्यालयमा जागीर खाएको कसैले बिर्सिएका छैनन् । एकातिर तिम्रो श्रीमती सरकारी शिक्षिका, अर्कोतर्फ काठमाडौं बसेर एक सरकारी कार्यालयको जागिरे । यस्तो भाग्य लिएर को नै पो जन्मन्छ र यहाँ ?
भर्खरैको बजेट भाषणमा तिमीले प्रदेशको मेगाप्रोजेक्टका लागि भनेर करोडौंको बजेट नै आफ्नो मातहातमा राखेका थियौ । मलाई के शंका लाग्न थालेको छ भने कतै तिम्रो मेगाप्रोजेक्ट भनेको नरहरीनाथको नामको प्रतिष्ठान खोलेर कर्णाली प्रदेशलाई शिक्षाको नयाँ व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने त होइन ? नत्र भने त्यहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ, जसलाई समृद्ध पार्न खासै योजना बनाएको देखिदैन। बरु जुम्लामा भएको प्रतिष्ठानको शाख गिराउने खेलमा प्रदेश अस्पतालको नारा भट्टयाई रहेकै छौ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उल्लेखनीयता कतै देखिदैन । प्रदेश नम्वर दुईले प्रदेश आन्दोलनका हरेक शहीद परिवारलाई रोजगारी र सम्मान दिइरहेको छ तर कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आन्दोलनका शहीदका परिवारहरुलाई खादा ओढाउने बाहेक केही गरेको छैन। शहीद प्रतिष्ठानमा होइन दुर्घटना प्रतिष्ठानहरु, नावालक प्रतिष्ठानहरुलाई पैसा बाँडिरहेको देखिन्छ। यी सवै तथ्यहरुबाट हेर्दा कर्णाली प्रदेश उल्टो दिशामा नमूना हुने हो कि भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ।
एउटा कुरा तिमीसँग उर्जा मन्त्रालयमा हुँदा मैले लिएको ल्यापटप मन्त्रालयलाई फिर्ता गरि सकेको छु। अनि तिमीले पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासबाट लिएका ट्रक भरिका सामानहरु फिर्ता गर्यौ कि आफैसँग राखेका छौ कुन्नी ! शरीर भरि गोली बोकेका योद्धा विरेन्द्र चौलागाई (विनोद) हरुलाई अपमान गर्दा तिमीलाई आनन्द आउँदो रहेछ भन्ने कुरा भनि रहनु परेन। सुर्खेत जेलव्रेकका सहयोद्धा, अग्रज, अभिभावक डोल्पाका लोकबहादुर चलाउने बबरस्टारलाई एकरात बास पनि नदिई लखेटन पनि छोडेका छैनौ । जसले जीवनको उर्जाशील उमेर अरुको घरमा बास बसेर वितायो, त्यही मान्छेलाई परिस्थितिले एउटा हैसियतमा पुर्याएको छ, त्यसले अरुको सम्मान गर्न जान्दैन भने त्यसको जवाफ समयले नै दिनेछ।
एउटा गम्भीर कहावत छ, जसले अरुको भविष्यलाई पेस्तोलले उडाउँछ, त्यसको भविष्य समयको तोपले उडाइदिन्छ। सायद यही मार्गमा तिमी हिंडि रहेका छौ। तिम्रो जय होस् ।
उही देवीराम देवकोटा
रकु ७ कालीकोट।